Jereo eto ny boky tsara indrindra an'i Kate Morton, 2022
Boky Kate Morton 3 tsara indrindra
Betsaka ny mpanoratra mitady izany fifandanjana majika eo amin'ny zavatra sy endrika izany, eo amin'ny hetsika sy ny fandinihana, eo amin'ny lohahevitra sy ny firafitra izay miafara amin'ny fampiakarana azy ireo ho amin'ny sokajy mpivarotra an'izao tontolo izao. Misy ireo izay manjary lasa tompon'ny fifandirana fitantarana toy ny Joel dicker miaraka amin'ny fahatongavany sy ny fandehany taloha sy ankehitriny ary amin'ny ho avy nefa tsy mamela anao ho very amin'ny tetezamita. Ny sasany kosa tompon'ny zavakanto nentin-drazana amin'ny tantara klasika, toa ny Ken Follett, ny sasany toa Stephen King mahavita mamandrika antsika eo ambanin'ny hoditry ny endri-tsoratra fangorahana tena tanteraka.
Ahoana ny Kate morton ny hatsarana eo amin'ny dinamika sy ny halalin'ny tetika, eo anelanelan'ny tsipika sy ny taratra hita avy amin'ireo mpilalao. Amin'ny alàlan'ny fahombiazanao amin'ny fitantanana ireo mizana amin'ny literatiora mifatotra, ny olana rehetra natsangana dia nanjary nahomby. Satria ny toky azo antoka dia ny fomba fitantarana tantara iray izay manan-danja kokoa noho izay voalaza.
Tamin'ny 2007 ny Tantara voalohany nataon'i Kate Morton, Ny tranon'i Riverton, ary miaraka aminy ny fahombiazana eo noho eo sy ny famerimberenana ny vokatry ny literatiora Kate Morton, mpanoratra iray izay manantona ny karazana zava-miafina amin'ny fomba fijery misimisy kokoa, miaraka amin'ireo lafin-javatra vaovao marobe izay miafara amin'ny fizotry ny tantara manaitra ny mpamaky hatrany an'izao tontolo izao.
Novels 3 natolotr'i Kate Morton
Ny tranon'i Riverton
Grace Bradley dia vehivavy antitra tia, miaraka amin'ny fijery lalina sy malefaka. Ny renibeny mahazatra izay eritreretinao fa ny valanoranony tsirairay dia manana traikefa tamin'ny fotoana lavitra mahavariana.
Fa ny raharahan'i Grace Bradley dia ny an'ny vehivavy iray izay, tamin'ny fotoana nikatsoany farany teo anoloan'ny varavaran'ny fahafatesana, dia nanapa-kevitra ny hampifandray ilay toko mampivadi-po indrindra tamin'ny fiainany. Fantany fa ny fomba tsara indrindra dia ny hijoro ho vavolombelona momba ny zava-nitranga mivantana, ho an'i Marcus zafikeliny.
Ary noho izany dia miditra tantara mahafinaritra isika tamin'ny fiandohan'ny taonjato faharoapolo, miaraka amin'ny atmosfera nolokoin'ny kilasimandry tamin'izany fotoana izany. Nandeha tany amin'ny trano Riverton i Grace mba hiasa amin'ny serivisy. Ny zava-nitranga tamin'io fotoana io dia nadika ho fitantarana feno rivo-piainana, miaraka amina fiolahana mahagaga eo ambanin'ny atmosfera mbola taonjato fahasivy ambin'ny folo tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX.
Ny famonoan-tena nataon'ny poeta Robbie Hunter dia mitarika antsika hatramin'ny ankehitriny, izay nanomanana fanadihadiana momba ny toetrany hatramin'ny taloha, izay ahitantsika ny marina rehetra momba azy ...
Ny veloma farany
Raha toa ka tampon'isa vaovao eo amin'ny karazana mistery ny laharam-pahamehana an'i Kate Morton, dia navoaka taona vitsivitsy taty aoriana ity boky ity ary ampiarahina amin'ny boky hafa, mamerina ilay fototr'io lasa io ho toy ny farihy iray ao anaty rano maizin'ny fahamarinana goavambe manafina izay mitaky ambonin'ny.
Ny fanjavonan'i Theo kely tamin'ny 1933 teo amin'ireo tendrombohitra sy lohasaha dia fanakatonana diso ny tantara mainty tao amin'io toerana io. Tsy re mihitsy ilay zazalahy mahantra ary niparitaka ny alahelo ary nanosika ny fianakaviany hiala ilay toerana.
Sadie Sparrow dia inspektera polisy any Londres izay nandany ny fotoam-pialan-tsasatra very tao anaty maintso tao Cornwall tototry ny ranomasina Celtic.
Ny majika amin'ny kisendrasendra, toy io maoderina tsy azo lavina io, dia mitarika an'i Sadie ho any amin'ny habakabaka feno akony tamin'ny lasa izay nampiatoana ny fiainan'i Theo noho ny fisalasalana sy ny tahotra.
Ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana
Ny andro farany nataon'i Dorothy dia nivadika horohoron-tany nanodidina ny tsiambaratelo iray izay mahakasika ny fianakaviana iray manontolo ary teo alohan'izay i Dorothy dia niady hevitra momba ny maha-zava-dehibe azy mba hipoiran'ny fahamarinana, manakorontana ny zava-drehetra.
Amin'ny lafiny iray dia mandray anjara amin'ny tsiambaratelo amin'ny maha zoky azy koa i Laurel Nicholson, raha ny marina dia izy irery ihany no manana lakilen'ny fidirana amin'io toerana io taloha izay miafina ny antsipiriany izay toa manelingelina.
Ny miafina dia nanomboka tamin'ny 1961, fony i Laurel dia efa tovovavy manam-pahalalana ary tsy maintsy nialokaloka tamin'ireo zava-nitranga. Laurel dia mpilalao sarimihetsika manana asa lava ary rehefa afaka taona maro teny an-tsehatra dia heveriny fa tamin'io andro fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny reniny io dia tsy maintsy dinihiny izay nahatonga ny zava-nitranga tamin'io 1961 lavitra io.
Nanomboka aloha be daholo izany, tamin'ny 1941 tany London. Ny teti-dratsy dia mifindra amin'ny gadon'ireo zavatra hitan'i Laurel sy ny anadahiny Gerry, famadihana, lozam-pifamoivoizana, fahavelomana nandritra ny taona sarotra sy maizina tamin'ny Ady lehibe II.
Eo anelanelan'ny boky taloha sy ny sary tamin'ny fotoana hafa, manoratra tantara iray izahay izay mamaly tanteraka ny filànay be dia be hahita ny zava-miafin'ny fianakaviana Nicholson.
Fanehoan-kevitra 5 momba ny «boky Kate Morton 3 tsara indrindra»
24/04/2022 amin'ny 5:13 PM
Salama, heveriko fa iray amin'ireo boky tsara indrindra nosoratan'i Kate Morton ny The Forgotten Garden, satria mitondra anao any amin'ny seranan-tsambo nandao an'io zazavavy kely io ary ny tantara notantaraina nanomboka tamin'io fotoana io dia mahasarika, ny hany tsy novakiako dia ny Tsingerintaona nahaterahana.
25/04/2022 amin'ny 8:07 PM
Misaotra an'i Magaly tamin'ny fandraisanao anjara.
Pingback: Boky 3 tsara indrindra nosoratan'i Susanne Goga ›Janoary 2022
Pingback: Boky telo tsara indrindra nataon'i Liane Moriarty ›Septambra 3
Pingback: Jereo ireo boky tsara indrindra 3 nataon'i Jane Harper ›Aprily 2021